Semalt: कसरी रेफरल ट्राफिक तपाईंको डाटा लाई असर गर्छ
रेफरल यातायात के हो? किन यो महत्त्वपूर्ण छ? ठिक छ , Semalt को वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, जैक मिलर वर्णन गर्दछ कि रेफरल ट्राफिक ट्राफिकको क्षेत्र हो जुन अर्को साइट मार्फत तपाईंको साइटमा अवतरण गर्दछ । स्रोत अर्को डोमेनबाट लिंक हुनसक्दछ। गुगल एनालिटिक्सलाई तुरून्त थाहा हुन्छ जहाँ वेब साइट ट्राफिक तपाईंको साइटमा अवतरण अघि पहिले थियो। जस्तो कि यो (गुगल एनालिटिक्स) ले आफ्नो रिपोर्टहरूमा रेफरल ट्राफिक स्रोतको रूपमा यी वेबसाइटहरूको डोमेन नाम प्रदर्शन गर्दछ।
जब तपाईं सन्दर्भ ट्राफिक बहिष्कार गर्नुहुन्छ तपाईंको डाटा कसरी प्रभावित हुन्छ?
यो पूर्वनिर्धारित छ कि सन्दर्भकर्ताहरु नयाँ सत्रहरु स्वत: ट्रिगर गर्दछ। जे होस्, जब तपाईं कुनै पनि रेफरल स्रोत बहिष्कार गर्नुहुन्छ, त्यसो भए बहिष्कृत डोमेनहरूबाट वेब ट्राफिकले नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्दैन। स्पष्ट छ, यदि तपाईं रेफरल ट्राफिक नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं यस बहिष्करण सूचीमा डोमेनहरू समावेश गर्नु हुँदैन।
माथिको परिदृश्यबाट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कि रेफरलहरूले नयाँ सत्रहरू ट्रिगर गर्दछ, रेफरलहरू बाहेक त्यसपछि यसले संकेत गर्दछ कि यसले तपाईंको सत्रहरूको गणना कसरी गर्छ। यो अन्तर्क्रिया एकल वा बहु सत्रहरूको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ कसरी तपाईं सन्दर्भहरू ह्यान्डलमा निर्भर गर्दछ। उदाहरण को लागी, mysite.com मा एक प्रयोगकर्ता तपाइँको वेबसाइट को भ्रमण; thyite.com त्यसपछि mysite.com मा फिर्ता जान्छ। यदि तपाइँले तपाइँको वेबसाइट (yourite.com) लाई निकाल्नु भएको छैन भने दुबै सत्रहरू गणना गरिन्छ। एक पटक हरेक पटक उहाँ / उनी mysite.com मा अवतरण गर्दछन्। यदि अर्को तर्फ, तपाईं thyite.com लाई बाहिर गर्नुभयो भने मात्र एक मात्र सत्र ट्रिगर हुनेछ। त्यो कसरी रेफरल ट्राफिक छोडेर तपाईंको सत्रहरू गणना गरीन्छ।
रेफरल बहिष्करणको साधारण अनुप्रयोगहरू
तेस्रो पार्टी भुक्तानी प्रशोधनको लागि
क्रस डोमेन ट्र्याकिंग
तपाईं तथ्यबाट सतर्क हुनुपर्दछ कि डोमेन र यसको उप-डोमेनहरूबाट मात्र वेब ट्राफिक बहिष्कार गर्न सकिन्छ। सब-स्ट्रिंग मिल्दोको साथ डोमेनबाट ट्राफिक होईन।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ Website.com बाट रेफरल ट्राफिक बहिष्कार गर्नुहुन्छ भने डोमेन वेबसाईट.com बाट उप ट्राफिक र सब डोमेन अर्को.website.com समावेश छैन। अर्को-website.com बाट वेब ट्राफिक तथापि हटाइएको छैन।
कसरी एक सन्दर्भ बहिष्करण सूची सिर्जना गर्ने?
तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खातामा साईन ईन गरेर सुरू गर्नुहोस्
'व्यवस्थापक' मा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंको खाता स्तम्भमा कतै ड्रप डाउन मेनू प्रयोग गरेर, सम्पत्ती चयन गर्नुहोस् जुन तपाईं च्याट गर्न चाहानुहुन्छ
सन्दर्भ-अपवर्जन-सूची क्लिक गर्नुहोस्
डोमेन नाम थप्नुहोस् त्यसपछि तपाईंको सूची सिर्जना गर्नुहोस्
परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्, र तपाईं जानु राम्रो छ
बहिष्करण सूचीबाट कसरी डोमेन हटाउने?
यदि कुनै कारणको लागि तपाईंलाई बहिष्करण सूचीबाट डोमेन हटाएर पुनर्विचार गर्न राम्रोसँग परिचित छ भने तपाई सजिलैसँग त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ। माथिको चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् सानो विस्तार बाहेक - रेफरल थप्नको सट्टा यसलाई हटाउनुहोस्। मेट्नुहोस् डोमेन क्लिक गरेर समाप्त गर्नुहोस् त्यसपछि परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्।
पानी परीक्षण गर्नुहोस्
यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बहिष्करण सूची यसलाई परीक्षण गरी काम गर्दैछ। विज्ञहरूले तपाईंलाई गुगलको ट्याग सहायक रेकर्डि। प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन्। यसले तपाइँलाई बताउनेछ कि के बहिष्कार भइरहेको छ र के छैन।
त्यहाँ समयहरू छन् जब ट्राफिक बहिष्कृत अझै पनि तपाईंको रिपोर्टमा देखिन्छ। यो हुन सक्छ किनकि:
प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको साइट भ्रमण गर्नुभयो तपाईंले बहिष्करण सूची सिर्जना गर्नु अघि
तिनीहरू बुकमार्कहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्